Izindawo zase-Germany Eziku-Casino - Amakhodi Amabhonasi E-inthanethi Ase-inthanethi
(325 amavoti, isilinganiso: 4.98 out of 5)
Amasayithi wekhasino aku-inthanethi aphatha abadlali abavela eJalimane
Bheka uhlu lwezindawo zamakhasino eziku-inthanethi ezisingatha abadlali abavela eJalimane futhi zinikeze imidlalo esezingeni eliphezulu nephephile ye-inthanethi. Lapha uzothola izinhlobonhlobo zokuzijabulisa ezivela kumashini we-slot ukuze uphile imidlalo yasekhasino kusuka kubathengisi be-software abaqavile abanjengoNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming nabanye abaningi.
Ungafunda futhi ukubuyekezwa kwewebhusayithi yethu ye-casino ukuze uhlale usesikhathini ngokukhushulwa okuhle kakhulu kwe-intanethi, amabhonasi nezindlela zokukhokha ezitholakalayo kubadlali baseJalimane.
Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 ze-German Online Casino
Ukugembula sekuyisikhathi eside kunesimo sezomthetho eJalimane. Kuze kube yamuva, ukulawulwa komkhakha wokugembula kwahlala nemihlangano kahulumeni wendawo yamanye amazwe asebusini. Namuhla, ukugembula eJalimane kulawulwa ezingeni eliphakeme kakhulu.
Ukudumala kwezokugembula kwehlile kuma-1900 ngenxa yempi nokuhlukana kwezwe, kepha ngaphezu kweminyaka eyishumi edlule ukuthandwa kwabo kuphakanyisiwe. Kuwo wonke amaJalimane kunama-casino amaningi nezikhungo zokugembula ezigunyaziwe, ezilawulwa ukulawulwa okuqinile. Kodwa naphezu kwalokhu, ukugembula eJalimane kuthandwa kakhulu. Ngemuva kwesigamu esifushane kusuka ku-2008 kuya ku-2012, lapho ukugembula kubhekwa ngokungemthetho ngaphansi komthetho wesifundazwe (ngaphandle kukaSchleswig-Holstein), uhulumeni waseJalimane wabeka imithetho emisha elawula ukulayiseniswa kwabashayeli bezokugembula.
Ukugembula ku-intanethi eJalimane
Kuze kube yi-2012 umlando wokugembula enkundleni eJalimane kwakunzima kakhulu. Qaphela ikhathalogi yethu yokugembula inthanethi ukuthi naphezu kokuba ukugembula namakhasino kuvunyelwe ngokomthetho ezweni, isimo ngokugembula enkundleni akucaci ngokuphelele. Le ndawo yayingasetshenziswanga kuze kube yi-2008, lapho kuvinjelwa ukuvinjelwa komthetho. Kodwa-ke, lesi sigameko senqatshelwe yi-European Union ku-2010. Ngemva kwalesi sinqumo, isifunda saseJalimane saseSchleswig-Holstein samukela umthetho wawo wokugembula ku-intanethi eJalimane ngenjongo yokwenza amalayisense amaningi e-inthanethi.
Ngaphezu kwalokho, ku-2012, iSivumelwano SokuGembula saseJalimane sasibhalwe phansi, sivimbela ngokuqinile ukugembula ku-intanethi. Kwakulindeleke ukuthi amazwe ase-federal ayakuqinisekisa. Ngakho kwenzeka, ngaphandle kwesifunda saseSchleswig-Holstein. Kodwa, ekugcineni, lesi sifunda esihlubukile sithatha indlela ehlongozwa nguhulumeni, futhi sibukeze umthetho wayo. Noma kunjalo, ngaphambi kokwenza lokhu, usakhipha amalayisensi e-23 kumasayithi e-casino e-intanethi esikhathini esiyiminyaka ye-6.
NgoMeyi 2013, ikhasino yokuqala yaseJalimane eku-inthanethi enesizinda esithi "de" yethulwa ngesisekelo selinye lala malayisense. Uhulumeni ubengakakwazi ukwenza ngokusemthethweni imisebenzi yezindawo zokugembula eziku-inthanethi eJalimane ngenxa yobunzima abahlangabezane nabo ekulawuleni inqubo. Ngakho-ke, abadlali baseJalimane basebenzisa izinsizakalo zamasayithi wokugembula aku-inthanethi angaphandle atholakala ngesiJalimane noma ngesiNgisi.
Izicelo zokusesha zekhasino e-Jalimane:
suomiarvat casino online
i-aunty acid casino
I-nordicbet ibhonasi ohne einzahlung
noxwin ibhonasi ohne einzahlung
ikhamera bese uchofoza futhi uthenge einzahlung
ikhodi yebhonasi yezinhlamvu zamagama
saint vincent eliphakeme roulette automaten
saint vincent roulette esiphezulu spielautomat
igolide ibhonasi ohne einzahlung
ukuvuka kwe-anubis freispiel
i-aces kanye neight freispiel
ikhodi yebhonasi ye-adamas casino
ukuhamba kahle kwekhasino ayikho ibhonasi yamakhodi ediphozi ngoNovemba 2017
ikhodi yebhonasi ye-kaboo
ibhonasi yekhasino yekhasino
ikhodi yokukhangisa ye-mbit casino
Uhlelo lokusebenza lwe-betrally
0.1 Uhlu lwezindawo ze-Casino eziphezulu ze-10 ze-German Online Casino
2.1 Ukugembula eJalimane
2.2 Ukugembula ku-intanethi eJalimane
3 Izicelo zokusesha zekhasino e-Jalimane: